Otu esi etinye ma jiri Siege Benchmarking Tool na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye ma jiri Siege Benchmarking Tool na Ubuntu 20.04
Sunday, July 18, 2021 Friday, July 16, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Ngwá Ọrụ Siege Benchmarking
Nwalee webụsaịtị na Siege (Nnwale Live)
Jiri Siege nwalee ọtụtụ weebụsaịtị
nnọchibido bụ ule regression multi-threaded mepere emepe yana uru benchmark nwere isi elekwasị anya na nnwale ibu na nleba anya. Ọ nwere ike mesie ike nwalee otu URL yana ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ akọwapụtara nke ọma ma ọ bụ gụọ ọtụtụ URL n'ime ebe nchekwa wee mesie ha ike n'otu oge. Ihe omume a na-akọ mkpokọta ọnụọgụ hits edekọrọ, bytes bufere, oge nzaghachi, concurrency, na ọkwa nloghachi.
Na njedebe nke ntuziaka a, ị ga-ama otu esi etinye nnọchibido na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị Sistemụ arụmọrụ na ntuziaka na-esonụ. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ maka ụdị ọhụrụ Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo).
Ubuntu na-abịa na Siege n'ime ebe nchekwa ya na-adịghị mma ma dị ọhụrụ, ebe sọftụwia ahụ anaghị agbanwe mgbe niile dịka ụfọdụ ngwanrọ ndị ọzọ nyere ọdịdị mmemme ya dị mfe. Iji wụnye Siege, mee iwu ndị a:
Kwado ụdị nnọchibido ahụ ka ijide n'aka na etinyere ya yana tulee ya na ụdị nke dị ugbu a sitere na webụsaịtị Siege.
Nke mbu, iwu kacha ewu ewu maka iji Siege na Ubuntu 20.04 dị ka n'okpuru:
-t : A na-eji nhọrọ a ịtọ oke oge nke Siege na-agba.
-c : A na-eji nhọrọ a iji tọọ ọnụọgụgụ ndị ọrụ na-emekọ ọnụ.
-d : A na-eji nhọrọ a hazie oge igbu oge maka onye ọrụ ọ bụla.
-C : A na-eji nhọrọ a akọwapụta faịlụ nhazi nke gị.
-i : A na-eji ya kụọ URL ndị na-enweghị usoro.
-T : A na-eji ya ịtọ Ọdịnaya-Ụdị na arịrịọ.
-h : A na-eji ya gosipụta ozi enyemaka.
-l : A na-eji ya mepụta faịlụ ndekọ.
Ịtọlite ​​Siege dị nnọọ mfe, n'ihi na ọtụtụ ndabara dị mma. Isi nhọrọ ị ga-achọ ịgbanwe bụ ụzọ log.
Nke mbụ, mepee faịlụ nhazi site na iji nchịkọta akụkọ nano:
Chọta wee mebie ahịrị ahụ (# logfile = $(Ụlọ)/var/log/siege.log):
Ugbu a ọ bụ oge iji nwalee sava weebụ gị, rịba ama na nke a ga-adị ka mwakpo DDOS na ụfọdụ firewalls na WAF wee hụ na ị nwere ikike tupu iji ngwa benchmarking HTTP ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nkesa nke gị.
Iji mee ule ahụ, tinye ihe ndị a:
Nke a ga-emesi ike ule na ndị ọrụ 25 ndabara na-emekọ ihe maka otu nkeji. Ị ga-ahụ mmepụta na-esonụ:
Ozugbo benchmark ahụ mechara, ị ga-ahụ nsonaazụ ya:
Rịba ama, na-emekarị, na ị ga-agba ọsọ maka nkeji 5 ruo 15. Nkeji 1 ahụ bụ naanị ihe atụ maka ntuziaka. Eleghị anya ị gaghị enweta ezigbo ule nrụgide site na ịme naanị 60 sekọnd.
Na-esote, mgbanwe ọzọ ị nwere ike ịchọrọ ịgụnye bụ ọnụọgụ ndị ọrụ. Iwu ịmaatụ:
Oge a, mgbakwunye (-c) bụ maka ndị ọrụ na-emekọ ihe ọnụ. Ị nwere ike ịkọwa nke a na ofufe maka ule dị iche iche.
Ugbu a na faịlụ nhazi, ị nwere ike dezie oge, ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, data, timestamps ma ọ bụrụ na ị nwere ule a kapịrị ọnụ ị na-agba kwa ụbọchị na saịtị gị.
Akụkụ ọzọ dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ sysadmin ma ọ bụ na-ejikwa ọtụtụ ngalaba na saịtị na-eji ọtụtụ nnọchibido na faịlụ na-esonụ. (/etc/siege/urls.txt).
Mepee faịlụ ahụ na nano:
Na-esote, tinye URL ndị ịchọrọ ka a nwalere benchmark:
Ka ịchekwaa faịlụ (CTRL+O) wee (CTRL+X) pụọ. Iji mejuputa nnwale nrụgide webụsaịtị mee ihe ndị a:
Ị mụtala ka esi etinye HTTP benchmarking tool Siege maka Ubuntu 20.04 nke ọma. Ngwá ọrụ a dị mma iji hụ ihe sava gị nwere ike ijikwa na nkọwa okwu na ntọala dị ọcha, dị mfe nghọta. Kpachara anya, dịka anyị dọrọ aka ná ntị na mmalite ntuziaka a, nke ekwesịrị iji naanị na saịtị enyere ikike iji.
Otu esi etinye Sublime Text 3 na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Rust na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye SQLite 3 na Ubuntu 20.04 LTS
Otu esi etinye ImageMagick na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye ngwa VMware (Ngwaọrụ OpenVM) na Ubuntu…
Nginx Optimization Tuning na Caching
Otu esi etinye Rocky Linux 8.4 Nzọụkwụ site na nzọụkwụ na nseta ihuenyo